MB 2017 Agoosto, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Mucjiso waa dhacdo ka sarraysa oo ka sarreysa awoodda dabiiciga ah ee dabiiciga ah, in kasta oo CS Lewis uu ku tilmaamay buugiisa Miracles in "mucjisooyinka aysan ... jabin shuruucda dabeecadda. “Markuu Eebbe mucjiso sameeyo, wuxuu faragalin ku sameeyaa howlaha dabiiciga ah sida kaliya ee uu qaban karo. Nasiib darrose, Masiixiyiintu mararka qaarkood waxay qaataan fikrado qaldan oo ku saabsan mucjisooyinka. Tusaale ahaan, qaar baa odhanaya mucjisooyin badan haddii dad badani rumaystaan. Laakiin taariikhdu waxay muujineysaa wax ka soo horjeedda - in kasta oo reer binu Israa'iil ay la kulmeen mucjisooyin badan oo uu Ilaahay shaqeeyay, iimaan liin ma lahayn. Tusaale kale, qaar baa sheegta in bogsiinta oo dhami ay yihiin mucjisooyin. Si kastaba ha noqotee, bogsashada badan ayaan ku habboonayn qeexitaanka rasmiga ah ee mucjisooyinka - mucjisooyinka badankood waa natiijada ka soo baxda geeddi-socodka dabiiciga ah. Haddii aan farahayaga goynno oo aragno sida ay si tartiib tartiib ah u bogsato, waxay ahayd geedi socod dabiici ah oo Eebbe siiyay jidhka aadanaha. Habka bogsashada dabiiciga ahi waa calaamad (mudaaharaad) wanaagga Eebbe abuuraheena. Si kastaba ha noqotee, markii boog hoose uu bogsado isla markiiba, waxaan fahamsanahay in Ilaah uu mucjiso sameeyay - si toos ah ayuu u fara geliyay. Xaaladda koowaad waxaan ku lahayn calaamad aan toos ahayn iyo tan labaadna waa calaamad toos ah - labadaba waxay tilmaamayaan wanaagga Eebbe.
Nasiib darrose, waxaa jira qaar si xun u adeegsada magaca Masiix iyo xitaa mucjisooyin been abuur ah si ay u dhisaan waxa soo socda. Tan waxaa mararka qaarkood lagu arki karaa waxa loogu yeero "adeegyada bogsashada". Ficilkan xun ee noocan ah ee bogsashada mucjiso lama helo Axdiga Cusub dhexdiisa. Taabadalkeed, waxay ka warbixisaa adeegyada cibaadada arrimaha udub dhexaadka u ah iimaanka, rajada, iyo jacaylka Ilaah ee ay rumaystayaashu u sugaan badbaadada, taas oo ay ka barteen wacdinta injiilka. Si kastaba ha noqotee, ku xadgudubka mucjisooyinka waa inaysan yareynin qadarinteenna mucjisooyinka dhabta ah. Aan kuu sheego mucjiso aan anigu isu marag kici karo. Waxaan ku soo biiray salaadda kuwa kale oo badan oo u duceeyay haweeney kansar qabta ay horey u cunteysey qaar ka mid ah feedheeda. Waxay ku jirtay daaweyn caafimaad markii ay ku subkay, waxay weydiisatay Ilaah mucjiso bogsiin leh. Natiijadu waxay ahayd in kansarka oo aan mar dambe la baadhin oo ay feedhaheeda ka soo baxaan! Dhakhtarkeedii ayaa u sheegay inay tahay mucjiso ayna tahay inay sii wado wax kasta oo ay sameysay ». Waxay u sharraxday in aysan ahayn sababteeda waxa ay sameyneyso, laakiin ay tahay barako Eebbe. Qaar ayaa sheegan kara in daaweynta caafimaadku ay kansarka ka tagtay isla markaana feeraha ay dib ugu soo noqdeen iyaga, taas oo ah wax macquul ah. Kaliya taasi waxay qaadan laheyd waqti dheer, laakiin feeraha xubnaheeda si dhaqso leh ayaa loo soo celiyay. Sababtoo ah dhakhtarkiis "ma sharixi karo dhakhso u bogsashada", waxaan ku soo gabagabeynaynaa in Ilaah soo farageliyey oo uu sameeyey mucjiso.
Rumaynta mucjisooyinka lama huraan inay ka soo horjeeddo sayniska dabiiciga ah, iyo raadinta sharraxaadda dabiiciga ah maahan inay muujineyso aaminaad la'aan xagga Eebbe. Markay saynisyahannadu qiyaaseen, waxay hubiyaan in khaladaadka la tilmaami karo iyo in kale. Haddii khaladaad aan la ogaan karin inta lagu jiro imtixaanaadka, markaa kani wuxuu u hadlayaa mala awaalka. Taasi waa sababta aan isla markiiba u tixgelinaynin raadinta sharraxa dabiiciga ah ee dhacdo mucjiso ah diidmada aaminsanaanta mucjisooyinka.
Dhammaanteen waxaan u duceyneynay in la bogsiiyo kuwa buka. Qaar baa si dhakhso leh loogu bogsiiyey markiiba, qaar kalena si dabiici ah ayay u bogsadeen. Marka laga hadlayo bogsashada mucjisada ah, kuma xirna cidda ama imisa qof tukaday. Rasuul Bawlos kama bogsiinin "qodxantii hilibkiisa", in kastoo uu u duceeyay saddex Malaakii. Waxa aniga aniga ila quseeya ayaa ah: markaan u duceyno mucjiso bogsiin ah, waxaan ugu daynaa iimaankeena go'aankeena hadii iyo goorta iyo sida uu u bogsan doono. Waxaan aaminsanahay inuu sameeyo waxa ugu wanagsan maxaa yeelay waxaan ognahay in xigmaddiisa iyo naxariistiisa ay tixgalineyso qodobo aanan aqoonsan karin.
Markaan u duceyno bogsashada bukaanka buka, waxaan ku tusaa mid ka mid ah siyaabaha aan ugu muujin karno jacayl iyo naxariis xagga kuwa baahan, oo aan kula xiriirno Ciise ducadiisa aaminka ah ee ah dhexdhexaadiyeheenna iyo wadaadka sare. Qaar ayaa si qaldan u fahmay tilmaamaha ku jira Yacquub 5,14, taas oo ka dhigaysa inay ka labalabeeyaan inay u duceeyaan bukaanka, iyagoo u haysta in odayaasha kiniisadda oo keliya loo oggolaado inay sidaas sameeyaan, ama in ducada duqaydu si uun wax ku ool u tahay salaadda asxaabta ama ehelka. Yacquub sida muuqata wuxuu damcay inuu asaga oo jiheeya xubnaha kaniisadaha inay u yeeraan odayaasha si ay u subagaan kuwa buka, waxaa cadaatay inay odayaashu u adeegayaan sida kuwa baahan. Culimada Kitaabka Quduuska ah waxay u arkaan tilmaamaha rasuul Yacquub inuu tixraacayo u soo diray Ciise ee xertii labo koox labo ah (Markos 6,7), kuwan “waxay eryeen jinniyo badan oo shar leh, dad badan oo bukana saliid bay subkay oo caafimaadkoodii bay ka dhigeen” (Mark 6,13). 
Markaan u duceysaneyno bogsashada, waa inaanan u maleyneynin inay tahay shaqadeena inaan si uun ugu dhaqaajinno Ilaah inuu kudhaqmo nimcadiisa. Nimcada Ilaah had iyo goor waa hadiyad deeqsinimo leh! Markaa maxaad u duceyneysaa? Ducada ayaan ku wadaagno shaqada Ilaah nolosha dadka kale, iyo sidoo kale nolosheena, maxaa yeelay Ilaah wuxuu noo diyaariyaa wixii uu ku qaban doono iyada oo loo eegayo naxariistiisa iyo xikmadiisa.
Aan ku siiyo tixgelin tixgelin leh: haddii qofku ku weydiiyo taageero duco oo dhibaato caafimaad ah oo uu doonayo inuu ahaado mid sir ah, markaa codsigaas waa in had iyo goor la waafajiyaa. Mid ka mid ah waa inaan lagu jirrabin inuu rumeysan yahay in "fursadaha" ee bogsiinta ay si uun u siman yihiin tirada dadka u duceeya. Fikirka noocan oo kale ah kama yimaado Kitaabka Quduuska ah, laakiin wuxuu ka yimid hab sixir ah oo loo fikiro.
Mar kasta oo aan tixgelinno bogsashada, waa inaan xasuusnaano in Ilaahay yahay kan bogsada. Mararka qaarkood wuxuu ku bogsiiyaa mucjiso iyo Malaki kale si dabiici ah ayuu u bogsadaa si dabiici ah, taas oo horeyba ugu jirtay abuurkiisa. Sikastaba, sharaf oo dhan isagaa iska leh. Filiboy 2,27, Rasuul Bawlos wuxuu Ilaahay uga mahadcelinayaa naxariistiisa saaxiibkiis iyo la-shaqeeyaha Epafroditus, oo isagu muddo xanuunsanaa ka hor intuusan Ilaahay bogsiin. Bawlos kuma xusin adeegga bogsashada ama qof gaar ah oo leh awoodo gaar ah (ku lug leh). Taa bedelkeed, Bawlos wuxuu si fudud u amaanayaa Ilaah inuu bogsiiyay saaxiibkiis. Tani waa tusaale wanaagsan oo ay tahay inaan raacno.
Mucjisada la ii oggolyahay in aan ka marag furo iyo mid kale oo aan ka maqlay kuwa kale, waxaan ku qanacsanahay in Ilaah maanta bogsanayo. Markaan xanuunsan nahay, waxaan xorriyadda ku leenahay Masiixa si aan u weydiisano qof inuu noo duceeyo, oo u yeerno odayaasha kaniisadaha, oo uu saliid igu subko, oo aan u baryeno bogsigeenna. Markaa waa masuuliyadeena iyo mudnaanteena inaan u duceyno dadka kale, adoo weydiisaneyna in haddii uu yahay doonistiisa, inuu bogsiin doono kuwa inaga mid ah oo jiran iyo kuwa silica ah. Si kasta oo ay tahay, waxaan ku kalsoonahay jawaabta Ilaah iyo waqtiga.
Ku mahadnaqa bogsashada Eebbe,